Nalain'ny Taliban vola 12.3 tapitrisa $ sy volamena tamin'ny tompon'andraikitra teo aloha, avereno any amin'ny banky nasionaly
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Afghanistan » Nalain'ny Taliban vola 12.3 tapitrisa $ sy volamena tamin'ny tompon'andraikitra teo aloha, avereno any amin'ny banky nasionaly
Vaovao Mafana Afghanistan • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovaom-panjakana • Zon'olombelona • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Nalain'ny Taliban vola 12.3 tapitrisa $ sy volamena tamin'ny tompon'andraikitra teo aloha, naveriny tany amin'ny banky nasionaly
Ny vola sy vola fisotroana volamena dia azon'ny Taliban tao an-tranon'ny tompon'andraikitra teo aloha ary ny biraon'ny masoivohon'ny governemanta teo aloha ary naverina tany amin'ny tahirin'ny Banky Da Afghanistan, hoy ny banky tamin'ny fanambarana nataony.
Taliban dia naka vola mitentina 12.3 tapitrisa dolara sy volamena tao amin'ireo trano sy biraon'ny mpitantana sy ny mpitandro ny filaminana teo aloha.
Ny entana sarobidy efa nogiazana dia natolotry ny tompon'andraikitra Taliban ho an'ny Da Afghanistan Bank izay banky foibe ao amin'ny firenena.
Araka ny fanambaran'ny banky, ny fanolorana ireo fananana dia manaporofo ny fahavononan'ny Taliban hanana mangarahara.
Ny Da Afghanistan Bank (DAB), banky foibe ao amin'ny firenena, dia namoaka fanambarana androany nanambara fa nanolotra vola mitentina 12.3 tapitrisa dolara amerikana sy volamena vitsivitsy tamin'ny talen'ny banky ny Taliban.
"Ny manampahefana ao amin'ny Emira Islamika any Afghanistan amin'ny alàlan'ny fanolorana ireo fananana ho any amin'ny tahirimbolam-pirenena dia nanaporofo ny fahavononany mangarahara," Banky Da Afghanistanhoy ny fanambarana.
Taorian'ny nitondrany an'i Kabul renivohitra tamin'ny 15 Aogositra, ny Taliban nanambara ny fananganana governemanta mpisolo toerana ny 7 septambra, nanendry minisitra mpisolo toerana maromaro ary governora mpisolo toerana ao amin'ny banky afovoany Afghan.
Banky Da Afghanistan no banky afovoan'i Afghanistan. Izy io dia mifehy ny asa fitantanana ny banky sy ny vola rehetra any Afghanistan. Ny banky dia manana sampana 46 manerana ny firenena ankehitriny, ary ny dimy amin'izy ireo dia ao Kabul, izay misy ny foiben'ny banky.
The Taliban dia naka fahefana tany Afghanistan roa herinandro talohan'ny nanombohan'ny Etazonia hamita ny fisinton'ny tafiny taorian'ny ady naharitra roa taona.
Nanafika ny firenena ireo mpikomy, nisambotra ny tanàna lehibe rehetra tao anatin'ny andro vitsivitsy, satria nihanalefaka ny mpitandro ny filaminana Afghana voaofana sy nilain'ny Etazonia sy ireo mpiara-dia aminy.
Ny filoham-pirenena teo aloha, Ashraf Ghani, dia nibolisatra ary tsy nanao fanambarana ampahibemaso rehefa nitety ny firenena ny Taliban. Rehefa tonga tany renivohitr'i Kabul ny Taliban, nandositra an'i Afghanistan i Ghani, izay voalaza fa manana vola voaroba 169 tapitrisa dolara, nilaza fa nifidy ny handao ny firenena izy mba hialana amin'ny fandatsahan-dra bebe kokoa.
Ny Taliban dia nitady ny hampiseho ny tenany ho hery maotina kokoa tato anatin'ny taona vitsivitsy. Hatramin'ny nandraisan'izy ireo ny fahefana dia nampanantena izy ireo fa hanaja ny zon'ny vehivavy, hamela ny helok'ireo niady tamin'izy ireo ary hisorohana ny fampiasàna an'i Afghanistan ho tobin'ny fampihorohoroana. Saingy maro ny Afghana no tsy mino an'izany fampanantenany izany.